Vaovao - Inona avy ireo fampiharana samihafa amin'ny fitaovana samihafa amin'ny Pointer Pattern Aluminium Plate？
Inona avy ireo fampiharana samihafa amin'ny fitaovana samihafa amin'ny Pointer Pattern Aluminium Plate？
Ny fiasa fototra amin'ny takelaka alimina modely dia ny fisorohana ny fivezivezena. Ny seha-pikatrohana mahazatra antsika dia ny fiara fitateram-bahoaka, escalator, ascenseur, sns., Izay anaovana takelaka alimina misy modely mba hisorohana ny fivezivezena. Amin'ireto tontolo iainana ireto dia tsy avo ny fepetra takiana amin'ny takelaka aluminium, ary ny takelaka aluminium 1060 dia afaka mahafeno ny fepetra takiana. Ka inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny fampisehoana samihafa sy ny fampiharana ny fitaovana alimina modely? Ity manaraka ity dia andiany kely hanolorana anao.
Ny fitaovana fitahirizana entana dia mila anti-skid ihany koa, amin'ireto tontolo iainana ireto, ny fahombiazan'ny fanoherana ny harafesina dia famantarana lehibe, ny fahombiazan'ny aluminium 1060 dia tsy afaka nampangatsiaka ny fahombiazan'ny anti-skid, takelaka aluminium 3003 ho takelaka alimina anti-harafesina matihanina, no anti- tetikasa tsy mandeha amin'ny tontolo mando. Ankoatry ny takelaka aluminium 3003, ny takelaka aluminium 3A21 dia mahazatra ihany koa, ny rehetra dia ao anatin'ny lohan'ny alimina manganisy aluminium miisa 3.
5052 Ny takelaka vita amin'ny aliminioma misy maodely dia ampiasaina amin'ny tontolo an-dranomasina.
Ny iray amin'ireo tombony azo amin'ny takelaka alimina 5 dia ny mahatohitra tsara ny fahasimban'ny asidra sy ny tontolo alkali, noho izany ny takelaka alimina 5052 dia ny fitaovana fanoherana ny skid lehibe eo amin'ny tontolo an-dranomasina. Mazava ho azy, ao amin'ny takelaka aluminium 5 andian-dahatsoratra, misy ihany koa marika toy ny 5083, 5754, sns., Izay azo ampiasaina hamokarana takelaka alimina modely.
Inona avy ireo fampiasana takelaka vita amin'ny alimina modely? Misy ihany koa ny sehatry ny fampiharana, toy ny sehatry ny asa an'habakabaka, ny tontolo iainana anti-skid amin'ny hafanana, ny asidra avo ary ny fikajiana alkali, noho ny antony fiarovana, avo lenta ny fampisehoana takelaka vita amin'ny aliminioma, teraka ny takelaka aluminium miisa 6061. 6061 takelaka aliminioma ny lafiny rehetra amin'ny fampisehoana dia tena tsara, afaka manome fiarovana matanjaka ho an'ny tontolo iainana tandindonin-doza.
Ny atiny etsy ambony dia ny fampiharana samihafa amin'ny fitaovana samihafa amin'ny takelaka firavaka aluminium izay ampahafantarin'i Ketchum anao. Miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia fanodinana aliminioma sy ny fivoaran'ny dingam-pamokarana, ny karazana sy ny akora vita amin'ny alimina vita amin'ny alimina dia hitombo hatrany ary hanana andraikitra lehibe amin'ny indostria maro kokoa.
vidin'ny takelaka vita amin'ny takelaka aluminium, Takelaka aluminium mora vidy, Ravina aluminium 7050, Mpamatsy vy vita amin'ny alim-bary vita amin'ny alim-bary, firaka aluminium 6061 vidiny, Takelaka aluminium vita amin'ny takelaka,